Isikhokelo esifutshane: Ukwenza iWebhusayithi yakho yeNdawo isiPhumelele - IBhlog yeNdawo ethengisa izindlu nomhlaba - realtyWW:
EyoMdumba 04, 2019 by UMike Haynes, Iimbono zizonke:
Intengiso yeendaba ezentlalo iguqule intengiso ngeendlela ezahlukeneyo. Uninzi lwamashishini emveli angawamkeliyo amathuba eendaba ezentlalo abakhoyo mihla le. Njengomntu othengisa izindlu kwakhona, enye indlela yokuqinisekisa ukuba wenze okona kuphume phambili Imidiya yokuncokola Kukukhetha enye yeqonga le-Intanethi kwaye ugxile ekuthengiseni iwebhusayithi yakho ngeqonga.
Eyona ndlela ilungileyo yokukhuthaza ishishini lakho kukuqinisekisa ukuba ucacile uqhagamshelwano nabo. Imithombo yeendaba kwezentlalo ikwayindawo efanelekileyo apho unokuqhuba khona ngokwenyusa njengendlela yokufumana abathengi abaninzi ukuba bathenge iimveliso zakho.
Uninzi lwamaqonga eendaba ezentlalo lwenziwe ngendlela yokuba zenze unxibelelwano phakathi kwabathengi lube lula. I-Facebook, umzekelo, inezincoko ezenza abathengi bafumane iimpendulo kwangoko kuwe nangona ungafumananga kwi-Intanethi.
Sebenzisa iiNjini zokuKhangela kunye ne-SEO
Enye yeendlela ezilula zokuqinisekisa ukuba ufumene itrafikhi kwindawo yakho ngokusebenzisa iindlela ezifanelekileyo ze-SEO. Qiniseka ukuba ulwazi olukuwebhusayithi yakho lunokufakwa kwizalathiso ukuze ufumane abantu abaninzi abatyelele iwebhusayithi yakho ukuze bafumane iinkonzo abazifunayo.
Ukuba wenza umxholo kwiwebhusayithi yakho, qiniseka ukuba unikeze umxholo ngokusekelwe kumagama athile okuphakamisa ukwanda.
Ukuqhuba i-SEO esebenzayo kufuna ukuba umntu abe nolwazi lweendlela zokukhangela iindwendwe ezinje ngohlobo lwegama abalichazayo xa bekhangela into kwi-Intanethi.
Velisa imixholo yomgangatho
Ngaphandle kokusebenzisa iindlela ezahlukeneyo ze-SEO, kuya kufuneka ukuba uqiniseke ukuba wenze umxholo osemgangathweni oya kwenza iindwendwe zihlale zibuyela kwindawo yakho zizokufuna ngakumbi. Iya kwenza iwebhusayithi yakho ukuba ifumane izingqinisiso kwezinye iisayithi kwaye uya kuthathwa njengogunyazisiweyo.
Ukuba unayo iwebhusayithi yeefoto zepropathi, qiniseka ukuba wongeza icandelo kuyo kwaye uyibize ngokuba yi-blog. Thumela umxholo oza kunceda abantu abakhangela izindlu abahlala kuzo.
Khuthaza abatyeleli ukuba babhalise
Uninzi lwabantu abatyelele iwebhusayithi abafuni kubhalisa. Nangona kunjalo, njengomnini-shishini, kuya kufuneka ujonge iindlela ezahlukeneyo zokwenza ukuba abathengi babhalise kwiwebhusayithi yakho. Yenza iifom zobhaliso ezilula ezingadibaniyo.
Ukubhalisa abathengi bakho kwi-intanethi kuya kudlala indima enkulu ekwakheni isiseko sabathengi kwishishini lakho.
Ezi ndlela zingasentla zokuthengisa iwebhusayithi yakho zingasetyenziswa kuzo iiwebhusayithi zee-realtors ukwandisa ukugcwala nokufikelela kubathengi abaninzi.
UMike Haynes Februwari 4, 2019
Olu ngeno yafakwa kwi Ishishini lokuthengisa izindlu noqhotyosho iiwebhusayithi zee-realtors. Bookmark le Permalink.
Matshi 3, 2017 Iindlela ezi-7 abahlaziyi bangasebenzisa ibhlog ukukhulisa isiseko somthengi wabo I-Realtors inomsebenzi ofuna ukunxibelelana ubuso ngobuso. Oku bekusoloko kungumsebenzi oqondakalayo oxhomekeke kumntu onolwazi oluninzi lwabantu. Ewe kunjalo, banokufikelela kuphela kubantu abaninzi ngokusebenza kwindawo yabo esondeleyo. Amandla okufikelela kwabanye angenakubalwa akhoyo kwihlabathi lanamhlanje le-Intanethi. Ngokusebenzisa ibhlog, abathengisi bezindlu ekugqibeleni banokwenza uphawu lwabo kwiindawo abahlala kuzo kwaye banxibelelane nabathengi abatsha ngokulula kunangaphambili. Iindlela ezi-7 […] exhonyiweyo Ishishini lokuthengisa izindlu
Septemba 29, 2016 Indlela iSignage ingalunceda ngayo uphawu kwiShishini lakho Abanini bamashishini bayazi ukuba abanakubatsala abathengi ukuba abazi ukuba inkampani ikho. Yiyo lo nto beqesha ukwakha kwiindawo ezinabantu abaninzi bezithuthi kwaye bahlala bebhengeza kwiindawo apho abantu baya kubona ezo ntengiso. Nangona kunjalo, iinkampani zinokujonga indlela ebaluleke ngayo imiqondiso kwinkqubela phambili yenkampani. Makhe sijonge ikhonkco phakathi kophawu kunye neempawu kwaye zidwelise ezinye zezizathu zokuba kutheni kufuneka usoloko upapasha ishishini lakho nangona kunokwenzeka. Ukwenza uphawu kweSignage yi […] exhonyiweyo Ishishini lokuthengisa izindlu
Ngamana 29, 2017 I-5 yeeNdawo eziNgcono zoShishino lweeNdawo kunye naMathuba kwi2017 Ukuthengiswa kwezindlu kubonakala kungomnye weyona mizi mveliso mikhulu apho amathuba eshishini kwikona nganye. Abanini bamashishini abaninzi kule ndima bathi zininzi iindlela zokujika inzuzo. Lo ngumsebenzi oguqukayo onokuba nawo ngenxa yokuba unokuseta ishedyuli yakho kwaye uqiniseke ngomvuzo wakho wonyaka. Nazi iimbono zeshishini lokuthengisa izindlu nomhlaba nge5 ukuba ufuna ukuqhuba kweli shishini. 1. Umthengisi wezindlu nomhlaba Umsebenzi wakho kukusebenza njengomnxibelelanisi phakathi kwabathengisi kunye nabathengi […] exhonyiweyo Ishishini lokuthengisa izindlu
Oktobha 13, 2016 Ukuthengisa okuphezulu kwezentengiso zeemfihlo zeshishini Ngosasazo lweendaba zentlalo, amashishini anokuhlala enxibelelana nabalandeli abathile. Ukwenzela ukudibanisa iinethiwekhi zentlalo kwiindlela zabo zokuthengisa, kufuneka baphuhlise imodeli yentengiso. Ukuba inkampani yakho ayisebenzi kumasayithi eendaba ezentlalo, ngoku lixesha lokuba uqale. Ngokukhawuleza xa kulungile ukwenza into oyithumelayo kwabanye, amashishini kusafuneka athathe ixesha ukulandela abathengi xa bebuya, utsho njalo. Intengiso yenethiwekhi yoluntu iyafana nokubeka […] exhonyiweyo Ishishini lokuthengisa izindlu
Julayi 2, 2018 Isikhokelo sokufota sokuthengiswa kwezindlu Yintoni ifoto yokuthengisa izindlu nomhlaba? Uhluke njani kwezinye iintlobo zentengiso yfoto? Inokwenzeka njani kwimfuno enkulu kangaka kwaye kunokuba ibe nzima ngaxeshanye? Makhe siqwalasele ezinye izinto ezikhethekileyo zokufota ngokuthengiswa kwezindlu nomhlaba, amaxwebhu ayimfuneko, kunye neengcebiso zokuthatha iifoto zokuthengiswa kwezorhwebo nezokunceda ukuqhuba kakuhle kule ndawo. I-realtor ayifuni nje isibhamu sendlu ukusuka ngaphandle nangaphakathi ukuyithengisa. Une […] exhonyiweyo Ishishini lokuthengisa izindlu
Agasti 24, 2017 Ungazifumana njani iiAgents zeZindlu eziLungileyo eBristol Bonke abantu abafuna ukuthengiswa kwezindlu nomhlaba ngokulula kufuneka babe nomnye wabathengisi bezindlu. Ungagcina i-80% yengeniso kwishishini lakho ngokuchitha isixa semali kwiarhente, kodwa owona mbuzo ubalulekileyo ebantwini malunga nokufumana eyona arhente intle kukhuphiswano. Ukuba negqwetha elifanelekileyo akuthethi ukuba basebenza kwenye yezona broker ezinkulu zokwenza imali. Inkcazo yearhente oyifunayo ubuxoki kumava obuchwephesha […] exhonyiweyo Ishishini lokuthengisa izindlu